Iwu nkwụghachi - Kdom
Daalụ maka ịzụ ahịa na The Kdom!
N'ihi nnukwu ihe anyị chọrọ na ọnụego afọ ojuju nke ndị ahịa 5, anyị enweghị oke nloghachi, nkwụghachi, ma ọ bụ mgbanwe na ngwaahịa anyị.
In Kasị N'ọnọdụ, AKW ALLKWỌ AKA NA-EGO
Ajụjụ a na-ajụkarị: Gini mere ịhapụghị nkwụghachi, nloghachi, ma ọ bụ mgbanwe?
Ihe kpatara na anyị anaghị ekwe ka nkwụghachi na nlọghachi bụ n'ihi na ihe anyị pere oke ma hazie gị. Ọ bụrụ na onye ahịa ekpebie na ha chọrọ iweghachi ihe, ọ bụghị ihe anyị nwere ike iwezigharị ma yabụ mebie ihe niile. Otu ihe anyị na-ewere bụ na ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-eji ịzụrụ ihe n'ịntanetị n'ịntanetị. Ọtụtụ mgbe, ha na-akwa ụta maka ya mgbe ha zụtara ya ma ọ bụrụ awa ole na ole ha zụtara ma kpọtụrụ onye na-ere ya maka nkwụghachi ka ha gbanwere obi ha banyere ya. Anyị chọpụtara nke a dị ka akparamagwa ndị ahịa na-adịkarị na ọ bụ ya mere anyị ji kpebie na ọ bụ maka ọdịmma anyị kacha mma iwepu iwu nkwụghachi mbụ anyị nweburu.
Anyị achọghị ka ị were nke a dịka ihe jọrọ njọ. Dịka ndị otu, anyị ga-eme mbọ ike anyị iji hụ na 100% jide n'aka na anyị na-eme ihe niile anyị nwere ike ime iji mee ka afọ ju gị dịka onye ahịa na ngwa ahịa ọhụụ gị.
Biko gbaa mbọ hụ na ị na-atụ ihe ziri ezi, nha, na ụcha ya. Biko gbaa mbọ gụọ nha nwere ike itinye. Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka, biko kpọtụrụ anyị ozugbo, anyị ga-alaghachikwute gị ozugbo enwere ike.
Iji belata ihe egwu nke ibute nsogbu dị iche iche, anyị enyegoro onyunyo na ibe nkọwa ngwaahịa anyị akpụkpọ ụkwụ ukwu, suede akpụkpọ ụkwụ, sneakers, sọọsọ, toms ịke, slịpas.
Ekwesịrị itinye akwụkwọ ọ bụla maka ihe ndị mebiri emebi / mebiri emebi / nke nwere nkwarụ n'ime ụbọchị iri atọ anabatara ngwaahịa a. Maka ngwugwu ndị furu efu n'ụgbọ njem, aga-enwerịrị nkwupụta ọ bụla tupu ụbọchị 30 ka ụbọchị nnyefe echere. Anyị na-ekwu na anyị chere na anyị mehiere ihe na ihe anyị na-akwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ n’ịchọpụta otu okwu dị na ngwaahịa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na ntanetị, biko zitere anyị email na support@thekdom.com
Edebere adreesị nloghachi na ndabara n'ụlọ ọrụ anyị Mgbe anyị natara ụgbọ mmiri lọtara, a ga-ezitere gị ozi email na-akpaghị aka. Onwetara ego ekwughi ka enyere onyinye aka ka ụbọchị iri atọ gasịrị. Ọ bụrụ na ejighị ụlọ ọrụ anyị dị ka adreesị nzaghachi, ị ga - akwụ ụgwọ maka mbupu ụgbọ mmiri ọ bụla ị nwetara.
Adreesị na-ezighi ezi - Ọ bụrụ n’ị nye adres nke e chere na ezighi ezi ozi na ezughi oke, aga ebughachi ya na ọdụ anyị. Res ga-akwụ ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ ego ozugbo anyị ejikọtara ya na adreesị emelitere.
Ekwughi - Returnedgbọ mmiri na-agwaghị ekwupụtaghachiri na ebe ọrụ gị, ị ga-akwụ ụgwọ maka ụgwọ izizi gị.
Ndị Akpọghachitere - Ọ kachasị mma ịkpọtụrụ anyị tupu ịlaghachi ngwaahịa ọ bụla. Anyị anaghị enweta nkwụghachi ụgwọ maka nchegharị nke onye zụrụ ya.
Ozugbo anyị nwetara ihe gị, anyị ga-enyocha ya ma gwa gị na anyị natara nloghachi gị
ihe. Anyị ga-agwa gị ozugbo ọnọdụ nke nkwụghachi gị mgbe ị nyochachara ihe ahụ.
Ọ bụrụ na akwadola nlọghachi gị, anyị ga-ebido nkwụghachi na kaadị akwụmụgwọ gị (ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ mbụ).
Ga-enweta otuto site na ụbọchị ole na ole, ọ dabere na amụma ndị na-enye gị kaadị.
Mbubreyo ma ọ bụ efu refunds (ma ọ bụrụ na ọdabara)
Osote kpọtụrụ ụlọ akụ gị. A na-enwe oge nhazi ụfọdụ tupu ezighachi nkwụghachi.
Will ga-akwụ ụgwọ iji kwụọ ụgwọ mbupu ngwa ahịa gị maka iweghachi ihe gị. Ọnụ ego mbupu ụgbọ mmiri anaghị akwụghachi ụgwọ.
Ọ bụrụ n ’nkwụghachi, a ga-ewepụ ego eji ebugharị ebugharị na nkwụghachi gị.
Ọ bụrụ na ịnwee ajụjụ ọ bụla gbasara otu ị ga-esi weghachiri gị ihe anyị, kpọtụrụ anyị
Biko, egbula oge kpọtụrụ anyị Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị enyemaka ọ bụla.